नेपाली खेलाडी आबद्ध मेलबर्न स्टार्सले मेलवर्न रेनिगेड्सलाई हरायाे - Dainik Nepal
नेपाली खेलाडी आबद्ध मेलबर्न स्टार्सले मेलवर्न रेनिगेड्सलाई हरायाे
दैनिक नेपाल २०७६ पुष २६ गते ७:४४
लण्डन, २६ पुस । अस्ट्रेलियामा जारी बिग ब्यास लिग क्रिकेटमा नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने आबद्ध मेलबर्न स्टार्सले मेलवर्न रेनिगेड्सलाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ ।
टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको रेनिगेड्सले निर्धारित ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १६८ रन बनाएको थियो ।
१६९ रनको लक्ष्य मेलबर्नले ३ विकेट गुमाएर ८ बल बाँकी छँदै पूरा गरेको थियो । खराब सुरुवात गरेको मेलवर्न स्टार्सका मार्कस स्टोइनिस तीन बल सामना गर्दै शून्यमा आउट भएका थिए । बेन डंकलाई दोस्रो विकेटको रुपमा गुमाउँदा स्टार्सले जम्मा स्कोर बोर्डमा ३६ रन जोडेको थियो ।
डंक १४ रन बनाएर आउट भए । उनले १५ बलमा १ चौका प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि क्रिजमा आएका निक लार्किनसँग मिलेर ओपनर आएका हिल्टन कार्टराइटले पारीलाई अघि बढाए ।
टिमको स्कोर ५४ रन हुँदा तेस्रो विकेटको रुपमा कार्टराइट व्यक्तिगत ३५ रन जोडेर आउट भएका थिए । २१ बल फेस गरेका कार्टराइटले ४ चौका र १ छक्का प्रहार गरेका थिए । पाँचौ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका ग्लेन म्याक्सवेलले आक्रामक पारी खेलेपछि मेलबर्न स्टार्स सहजै जित हात पार्न सफल भयो ।
म्याक्सवेलले ४५ बलमा ८३ रनको शानदार पारी खेले जसमा ७ छक्का र १ चौका सामेल थिए । उनलाई चौथो नम्बरमा क्रिजमा आएका निक लार्किनले गतिले साथ दिए । उनी ३३ रनमा नट आउट रहँदा २८ बल फेस गरेका थिए । उनको ब्याटबाट १ चौका र १ छक्का प्रहार भएको थियो ।
रेनिगेड्सका लागि समित पटेल, रिचार्ड ग्लिसन र क्यामरन वोएले एक एक विकेट लिए पनि लक्ष्य रक्षा गर्न सकेनन् । बिग ब्याश लिगमा मेलबर्नको यो सातौँ जित हो । ८ मध्ये ७ खेलमा जित हात पारेको मेलबर्न १४ अंकसहित शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ ।
थप ३१६ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या साढे १३ हजार नाघ्यो
चिढिएका ओली–प्रचण्डको बुधबार ‘वान टु वान’ वार्ताको अर्थ
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई धरौटीको ५० लाख चलाउन दिन कांग्रेसको आग्रह, अर्थमन्त्री सकारात्मक
प्रचण्ड र नेपाललगायत समूहको छुट्टै भेला
प्रधानमन्त्री ओली मुटुरोग अस्पतालमा
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा फैलियो सलह किरा
कुन प्रदेशमा कति पुगे कोरोना संक्रमित ?
वुधबार कहाँ कति थपिए कोरोना संक्रमित ?
थप ४ सय ८२ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १४ हजार नाघ्यो